अंग्रेजी कसरी सिक्न
सिक्न धेरै को अंग्रेजी सपना। भाषा को ज्ञान क्यारियर र यात्रा दुवै लागि उपयोगी छ। समस्या भाषा पाठ्यक्रम वा repetirorom को अध्ययन सबैले किन्न सक्छन् भन्ने छ, र सफलता कसरी राम्रो शिक्षक पतन हुनेछ निर्भर - आफूलाई त्रुटिहरू र गरिब उच्चारण संग भन्न धेरै अंग्रेजी शिक्षक।
त्यसैले, सबै भन्दा विजेता विकल्प - यो आफैलाई अंग्रेजी सिक्न। खुसीको कुरा, हाम्रो समय मा, यो धेरै सरल छ: इन्टरनेट तपाईं स्रोतहरू, जो कुनै पनि शिक्षक प्रस्ताव गर्न सक्दैन पहुँच प्रदान गर्छ, र तिनीहरूलाई को सबै भन्दा मुक्त छन्।
भाषा सिक्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो - यो विसर्जन छ। तपाईं एक काम पाउन वा अंग्रेजी बोल्ने देशमा धेरै महिनाको लागि नातेदारहरु संग रहन सक्छ भने त, धेरै प्रयास बिना अंग्रेजी तपाईं सिक्न सक्नुहुन्छ।
मौका एक अंग्रेजी बोल्ने देश बस्न यदि तपाईं अझै, त्यसपछि एक भाषा वातावरण अनलाइन हुन सक्छ आफूलाई लागि सिर्जना गरेको छैन। देशी वक्ता सञ्चार मा (कुरा र interlocutor बुझ्न) तपाईंलाई आवश्यक र सुन्न र लेखन गरेर अंग्रेजी भाषा को सही समझ।
शीर्षकहरू मा लेख फेला पार्न सजिलो कि ब्याज तपाईं र केही सिक्न रोचक र रमाइलो छ जब - तपाईं, यो सबै भन्दा राम्रो अखबार साइटहरु छ कुनै पनि अंग्रेजी वेबसाइट पढ्न सक्नुहुन्छ। Google को एक शब्दकोश वा अनुवादक मा अपरिचित शब्दहरू हेर्न, तर teskt अनुवाद क्षेत्रमा सम्पूर्ण लेख राख्नु छैन। तपाईं लेख अंग्रेजी मा छ पढ्न आवश्यक छ।
कान द्वारा अंग्रेजी भाषा को समझ को लागि, प्रविष्टिहरू समाचार साइटहरु cnn.com वा bbc.com हेर्नुहोस्। लगभग सबै टिभी विदेश स्टेशन रेकर्डिङ आफ्नो कार्यक्रम प्रस्ताव। जो पनि अनलाइन पाउन सकिन्छ चलचित्र अंग्रेजी मा, हेर्दै - तपाईं पनि YouTube, र सबै भन्दा मनोरंजक मा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ।
तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कुरा र सीधा मूल वक्ता संग कुराकानी गर्न छ।
कम से कम प्राथमिक तहमा कुरा गुगल अनुवादक फर्केर जान सुरु गर्न। तपाईं को लागि, खोजी गर्न यसको उच्चारण सुन्न, दोहोरिन र सम्झिन चाहन्छु जो रूसी वाक्यांश एनालग को अनुवाद लागि अनुरोध घुसाउनुहोस्। कम से कम, उच्चारण 100% सही हुनेछ, तपाईं सधैं repetirotom भाषामा अध्ययन मा प्राप्त गर्छन्। तपाईं प्रति दिन 5-6 वाक्य सिक्न भने, महिना को एक जोडी पछि तपाईं आधारभूत तहमा अंग्रेजी मा कुराकानी गर्न सक्षम हुनेछ।
अब यसलाई के तपाईं साँच्चै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई कसैले फेला पार्न समय। बालिका यस्तो elenasmodels.com, ब्रिटिश र अमेरिका जहाँ धेरै रूपमा डेटिंग साइटहरु मा प्रवेश गरेर, स्रोत फेला पार्न सजिलो छन्। मानिसहरू, पनि, यस्तो match.com रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय डेटिंग साइटहरु मद्दत गर्न सक्छ। तर तपाईं पहिले नै पति छ भने, तिनीहरूले गलत अर्थ लाउनु।
यस मामला मा, यो रूसी भाषा अध्ययन विदेशीहरू लागि साइटहरु प्रयोग गर्न सम्भव छ। तपाईं पनि उदाहरणका लागि,5डलर लागि रूसी भाषा बोल्ने अभ्यास को 30 मिनेट, सुझाव, जस्तै fiverr.com साइटहरु मा पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। एक देशी वक्ता कुरा, तपाईंले सधैं प्रत्येक अन्य बुझ्न क्रममा अंग्रेजी मा कुराकानी गर्न छ।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो भाषा सिक्न सक्छन्। यो केवल तपाईं मा निर्भर गर्दछ तपाईं कसरी छिटो प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईं प्रति दिन 4-5 घण्टा मा संलग्न छ भने, तपाईं छ महिना भित्र अंग्रेजी बोल्न सक्षम हुनेछ!
अंग्रेजी मा क्रिया अपवाद
हामी किन एक भाषा चाहिन्छ? म किन भाषाहरू सिक्न आवश्यक छ?
Voracious भोक - यो ... छ phraseological पर्यायवाची को मूल्य
यो अंग्रेजी मा हुनेछ "तपाईं कसरी हो?": बदलाव शब्द प्रश्न
फ्लैश बैक - एक कालानुक्रमिक स्मृति फाइल वा विगतका तस्बिरहरू? विश्लेषण मान र शब्द को विशेष प्रयोग
हामी यो व्याकरण सम्बन्धित छ जो, शब्द को लागि विशेषण को मामला कसरी निर्धारण बुझ्न
फुटबल खेलाडी मार्को वैन Basten: जीवनी, पेसा, व्यक्तिगत जीवन
कल्पना र कल्पना संग खाना पकाउने: को नुस्खा तला पकौडी
पूर्णता हासिल घरमा अनुहार cosmetology हुनेछ
प्लुटोनियम-238: रूस मा उत्पादन, फोटो, विशेषताहरु, आवेदन
ओवन मा चामल पकाउन कसरी स्वादिष्ट गर्न?
गुलाबी गुलाब र यसको प्रतीकात्मक रूप
तपाईंको फोनबाट एक ब्लग बनाउन र बनाउनुको लागि5अनुप्रयोगहरू
Sociometric स्थिति कसरी गणना गर्ने?
होटल "ड्यूविल", Anapa समीक्षाएँ र पर्यटक फोटो
"Tusupreks": प्रयोग, मूल्य लागि निर्देशन
को कपास-gauze पट्टी र कसरी आफ्नो आफ्नै हात बनाउन कहाँ गर्नुभयो?